Ndebanye aha DVLA | Importgbọ M Mbubata
Denye ụgbọ ala gị na United Kingdom
Ijikwa akwụkwọ ọrụ iji debanye aha ụgbọ gị
My Car Mbubata na-enye ọrụ zuru oke iji mee ka ụgbọ ala gị zuru oke n'okporo ụzọ UK debanyere aha DVLA. Anyị emeela mmekọrịta siri ike na DVLA ma nwee ike ijide n'aka na mgbe ịbubata na anyị, ndebanye aha gị na-eme ngwa ngwa na enweghị nsogbu. A na-arụ ọrụ ndebanye aha na nnwale n'ime ụlọ ma anyị nwere ike gbanwee ụgbọ ahụ iji hụ na ha na-agbaso ụkpụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ebubata ụgbọ ala na Europe, anyị ga-arụ ọrụ iji nweta Asambodo Nkwekorita (ma ọ bụrụ na ịnweghị otu). Akwụkwọ a ga-akọwazi mgbanwe ndị dị mkpa iji kwekọọ na iwu ndebanye aha okporo ụzọ UK. Nke a na-agụnye nnukwu ọkụ ihu, spidomita na ngbanwe ọkụ ọkụ ikuku. Anyị nwere ike ijikwa ihe niile edepụtara maka usoro ịdebanye aha ụgbọ ala UK gị site na usoro nnabata, na ngwa mbubata V55.
Maka mbubata na-abụghị European, anyị na-ejikwa ntinye ụgbọ ala NOVA abanye na mba ahụ, mgbanwe IVA na ule zuru oke, yana usoro ndebanye DVLA.
Ka anyị nyere aka debanye aha ụgbọ gị
Ihe ọ bụla ụgbọ anyị nọ ebe a iji nyere gị aka inweta ahụmịhe bara ụba nke na-abịa site na ịbubata ihe niile site na supercars nde-paụndị na ụgbọ ala ndị na-enweghị atụ.
Nwere ike inyere aka n'ịdenye aha ụgbọ ala UK mbụ?
Ọ bụrụ na ugbo ala sitere na United Kingdom mana edebanye aha na mba ọzọ n'okpuru mbadamba mba ọzọ, gịnị ka ị na-eme?
N'okpuru EU ahịa ụgbọ ala abawanyela na mbubata na mbupụ. Mmegharị ngwongwo n'efu na -egosi na enwere ike iburu ụgbọ ala ebe ọ bụla n'ime EU na -enweghị ọtụtụ ihe gbasara ụtụ isi. Ekele maka Asambodo Nhazi nke setịpụrụ ụkpụrụ maka ụkpụrụ EU - enwere ike mbupụ ụgbọ ala n'ọtụtụ oge na steeti ndị agbata obi.
N'agbanyeghị ihe kpatara ụgbọ ala nke edeburu aha na UK na-alọghachi - anyị nwere ike inye aka na usoro ịdebanye aha ya ọzọ. Ugboro oge karịa, enwere ike gbanwee ụgbọ ala maka ojiji na mba ọzọ dịka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ọ bụ mbubata ọhụrụ na UK.
Dị ka ndị dị otú a, anyị nwere ike ịmalite usoro ịmegharị ụgbọ ala UK mbụ na nnọchite gị ma mee ndebanye DVLA na nnọchite gị.
Ego ole ka m ga-akwụ n'ụgbọala?
Gbọ ala na United Kingdom na-atụ ụtụ isi kwa afọ nke a ga-akwụrịrị maka ụgbọala a ga-ebugharị ebe a.
Ụgbọ ala dị na United Kingdom na -atụ ụtụ isi kwa afọ nke a ga -akwụrịrị maka ụgbọ ala a ga -anya ebe a. Ọ dabere na anwuru nke ụgbọ ala ahụ ma nwee ọtụtụ bandings iji hụ na a kwụrụ ụtụ isi ziri ezi.
Mgbe ị debanyere ụgbọala ọhụrụ na United Kingdom, ịkwụ ụgwọ ụtụ isi otu mgbe gafere ọnwa 12, ị ga-akwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ. A na-akpọ nke a ụtụ ụtụ isi mbụ na ụtụ isi nke abụọ.
Ma ego ole ka ị ga-akwụ? Ọfọn, nke a dabere kpamkpam na ụgbọ ala na ụzọ ịdebanye aha.
Ihe ikuku ụgbọ gị kacha na-ebuwanye ibu, ọ ga-efu ụtụ. Nke a bụ ebe ụzọ ịdebanye aha nwere ike isi metụta ọnụego nke mbubata gị.
Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịba uru karịa ịnweta nnabata n'okpuru atụmatụ ule IVA. Mgbe IVA ule, umu anwuru na nkewa dị ka nanị n'okpuru ma ọ bụ karịa 1600cc.
Nke a dị oke mkpa ịmara n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma inwe ihe dịka 'Lamborghini Aventador LP 770', ha mepụtara ihe dịka 450g / km nke co2. Kedu nke ga-efu ihe karịrị £ 2000 ụgwọ ụtụ isi mbụ gị?
N'okpuru atụmatụ IVA, otu ụgbọ ala ahụ ga-akwụ obere ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ụtụ isi mbụ gị n'ihi ụdọ abụọ a na-atụ maka ụtụ isi ma ọ bụghị ọtụtụ ụtụ isi. Ọ bụ n'ezie ihe karịrị £ 1700 ịchekwa na 'ihe atụ a' tinyere ego nke CoC nke n'oge ederede bụ £ 900.
Ọtụtụ ndị ahịa anyị tụkwasịrị anyị obi ibubata ugbo ala ha n'ihi ịdị uchu anyị n'ịchọta nhọrọ ndị kachasị ọnụ ahịa maka ndebanye aha ha.
Biko rịba ama na anyị bụ naanị ụzọ nyocha IVA na United Kingdom nke nwere nkeonwe ma nwee ike ịnwale ụgbọ ala klaasị M1.
Nwere ajụjụ gbasara ịdebanye aha ụgbọ gị? Egbula idejupụta fọm maka etu anyị ga-esi nye aka.
Ego ole ka ọ na-efu iji deba aha ụgbọ ala na UK?
Ọnụ ego ịdenye ụgbọ ala gbanwere dabere n'okporo ụzọ ịdebanye aha, yana ụgbọ ala n'onwe ya. Ego a ga-akwụ na DVLA bụ obere akụkụ nke ụgwọ zuru ezu ịdebanye aha ụgbọ ala.
Gịnị bụ V55?
V55 bụ ụdị eji edebanye aha ụgbọ gị na United Kingdom. Mgbe ị gụchara ule gị, edechara akwụkwọ ahụ maka aha gị wee nyefee ya na nọmba NOVA gị. Anyị na-ahụ na ngwa gị ziri ezi iji zere nsogbu ọ bụla na-akpata igbu oge na ndebanye aha ụgbọ gị. Ọ bụrụ n’ịbubatala ụgbọala gị n’onwe gị ma chọọ enyemaka na akwụkwọ ọrụ ahụ egbula oge ị ga-enweta.
Gịnị bụ V5C?
Na ndebanye aha nke ụgbọ gị, a ga-eziga ndekọ nke nwere nkọwa nke ụgbọ gị na adreesị ị nyere. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke ịnwe ụgbọ ala na United Kingdom ma yie akwụkwọ ndebanye aha site na mba mbata ụgbọala ị ga-enye anyị mgbe ị na-edebanye aha ụgbọ gị.
Nwere ike inyere m aka inweta Asambodo Nkwekọ?
Ọ bụrụ na ịnwe akwụkwọ na DVLA chọrọ ịdebanye aha ụgbọ gị egbula oge ịkpọtụrụ gị ma anyị nwere ike inye aka na ịmegharị otu ma ọ bụrụ na ụgbọ gị si na EU.
Erubela m ụgbọala m na Nova?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịdebanye aha ụgbọ ala ugbu a na United Kingdom ma chọọ enyemaka na mmecha nke NOVA gị, egbula oge ịbịakwute anyị. Anyị nwere ike mezue ngosi nke ụgbọ mbata na nnọchite gị.
Kedu ụdị ọsọ ị nwere ike ịdebanye aha ụgbọ ala?
Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na DVLA ma anyị enweghị ike ikwe nkwa ihe ọ bụla - ogige anyị bụ naanị ụzọ nyocha IVA nwere nkeonwe. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịnwe ụgbọ ala edoziri maka ule IVA ngwa ngwa karịa onye ọ bụla ọzọ, ọ pụtakwara na anyị na DVLA na-arụ ọrụ nke ọma iji merie nsogbu ọ bụla na ndebanye aha gị.
Deal na-emeso ndenye aha isi awọ?
Agbanyeghị ebe ụgbọ gị si, anyị nwere ike inyere aka deba aha ya. Gaa na mkparịta ụka iji tụlee ihe ndị ị chọrọ pụrụ iche ma anyị ga-etinye ọnụ nkwupụta ọnụ.
Gịnị bụ ndebanye aha?
Onwere ugbo ala ndi n’achoghi abia na ogige anyi. Ọ na - enyere aka mee ka usoro ịdebanye aha ngwa ngwa n'ihi ọnụọgụ ego nke achọrọ. Ọtụtụ mgbe nhọrọ a na-ewu ewu maka ndị ahụ ịnshọransị ịkwọ ụgbọala ha n'ime EU ga-emezi ụgbọ ha n'ụgbọala mpaghara ma anyị nwere ike inye aka na mpempe akwụkwọ achọrọ iji debanye ụgbọ gị.
Otu ụgbọ ala maka usoro EU maka ụgbọ ala?
Ihe ka ukwuu n'ime mbubata ndị a ga-ebubata na UK site na EU nwere ike gbanwee na ebe ndọba ụgbọala, anyị nwere ike mezue akwụkwọ ahụ. Iji wepụ nsogbu na nke a ọ bụ ezie na anyị nwere ike n'ọtụtụ ọnọdụ gbanwee na MOT ụgbọala gị na ogige anyị na Castle Donington n'otu ụbọchị ahụ. Nke a dabere n'ụgbọ ahụ biko biko kpọtụrụ gị iji kwurịta ihe ndị ị chọrọ pụrụ iche.
Etufula m akwụkwọ ndebanye aha m na mba ọzọ, ị ka nwere ike ịdebanye aha ụgbọ ala m?
Anyị na-aghọta na ihe na-efunahụ site n'oge ruo n'oge. Akwụkwọ bụ akụkụ dị oké mkpa nke ịdenye ụgbọ ala ọ bụla na United Kingdom na-enweghị ha, usoro ndebanye aha nwere ike ịghọ aghụghọ.Na My Car Import, anyị na-emeso ọtụtụ okwu dị ka nke a kwa ụbọchị. Naanị kpọtụrụ anyị ga-ehota gị maka idozi nsogbu ahụ. Anyị chọrọ idebanye aha ụgbọ ala gị ọsọ ọsọ ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ụgbọ ala gị na United Kingdom.